Imiyalelo yokuhamba kwimeko
umbuzo Imiyalelo yokuhamba kwimeko
iinyanga 1 kunyaka 6 eyadlulayo #723 by Yorammelnik
Ndifuna ukudala imeko yendlela yokuhamba kwi-prepar3d v4.
Ndasebenzisa iSimDirector ukudala imeko ngoluhlu lweendlela.
Ingxaki yam kukuba xa ndiphaphazelayo andinakukwazi ukusebenzisa i-GPS okanye nayiphi na ifowuni ukufumana imiyalelo ye-nav kwiluhlu lweendlela.
Ngaba kukho indlela yokwenza oko?
Ixesha ukwenza page: 0.236 imizuzwana